Anerobic nrapado, Construction nrapado, Aqua Silicone Sealant - Huitian
Na 1997, e weghachiri ya na ụlọ ọrụ nkwonkwo-Hubei Huitian Glue Co., Ltd. Ọ bụ nke mbụ edepụtara n'otu ụlọ ọrụ ahụ na 2010, yana koodu ngwaahịa 300041.There nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe anọ dị na Shanghai, Guangzhou, Changzhou, na Xiangyang, na-ekpuchi mpaghara nke 1,300 acres, na-enwe ego kwa afọ nke 2 + ijeri, na-eje ozi 8 isi ụlọ ọrụ nke ụgbọala, ụgbọ okporo ígwè dị elu, ụlọ ọrụ, ngwá electronic, nkwukọrịta, fotovoltaics, nkwakọ ngwaahịa, na ihe owuwu. Onye ndu ụlọ ọrụ nwere ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu na ego kachasị elu na China.
Largestwa kasị ukwuu na-emepụta nkwukọrịta akụrụngwa-Huawei; Manufacturerlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè kasị ukwuu n'ụwa-CRRC; Largestwa ụgbọ ala kasị ukwuu n'ụwa-Yutong Bus; Largestwa kasị ukwuu fotovoltaic modul emeputa-JinkoSolar; No.wa nke 1 Ikanam ọkụ emeputa-Philips; Uzo mbu nke uwa-Hong Kong-Zhuhai-Macao Cross-sea Bridge; Largestgbọ elu ụgbọ elu kasị ukwuu n'ụwa-Beijing Daxing Airport;
Huitian, dabere na ọ dịghị mgbe ọ na-ekwenye ekwenye, enwetawo nsogbu na ọnọdụ ndị siri ike, site na ihe isi ike, buru ibu ma sie ike. Huitian tolitere dị ka onye na-eduzi ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ nrapado na China. Huitian sooro ọtụtụ ndị ahịa 500 Fortune rụkọọ ọrụ wee sonye na iwu ọtụtụ ọrụ ntinye aka nke ụwa.
Industrylọ ọrụ fotovoltaic
Ahịa ahia nke ụlọ ọrụ fotovoltaic bụ nke mbụ na ụwa. Otu n'ime atọ ọ bụla nwere ngwaahịa huitian.
Ikanam ahịa òkè bụ nke mbụ, na anyị nwere imekọ ihe ọnụ na n'elu iri ahịa. NO.1 ahịa òkè Na-arụ ọrụ na All top 10 ahịa.
Gbọ njem ndị njem
E nwere 37% ahịa òkè na azụmahịa ụgbọala ụlọ ọrụ maka Huitian ngwaahịa.We bụ soplaya nke Yutong, Jinlong, Jinlv, Zhongtong, Haige, Futian, wdg
Industrylọ Ọrụ Buildinglọ
Huitian nyere R&D nkwado ma wetara isi oru ngo bughi nke mmachi na mmechi structural nrapado nke mmiri na 120 afọ mma nkwa.
HUITIAN na-enye mkpokọta ngwaọrụ ejiri ngwa ngwa ngwa ngwa na ihe ntụgharị inverting.
Transzọ okporo ụzọ
380km / h CRH na-agba ọsọ ụgbọ okporo ígwè na-eweta ngwa ngwa, Huitian gafere 800,000 KM ule siri ike
Huitian kwadoro Jinko n'akụkụ dị iche iche na ahịa zuru ezu na Jinko karịa 100 nde na 2018 maka ihe karịrị 45% òkè.
Huitian ugbua-akpa nrapado soplaya YUTONG BUS, windshield iko, mmiri akara & bonding n'ozuzu ngwọta. anyị nwere ihe karịrị 70% òkè na bọs iko akara na YUTONG.
Huitian ugbua nwere 15 afọ akụkọ ihe mere eme na electronic nrapado ụlọ ọrụ ， inweta SGS, Mankeumman wdg.
HT906Z PV modul RTV akara
HT906Z bụ PV modul RTV akara nke ejiri maka PV modul etiti akara, ntughari igbe na njikọkọ okporo ígwè.
5299W-S bụ PV modul RTV sealant ejiri maka nkwụsị igbe ọkpụkpọ na eletriki na eletriki akụrụngwa chọrọ maka mkpuchi mmiri na ikpo ọkụ. Static mix na mix nri bụ 5: 1 n'ibu.
728 bụ ihe mgbaze-isi Pu nrapado nke na-eji maka lamination nke elu arụmọrụ film ihe, ọtụtụ etinyere ke plastic / plastic film na plastic / metalized film. Ngwaahịa a nwere njirimara nke mbido mbụ, ike ọkpọ na oke nghọta, nke nwere ike igbochi nsogbu ọwara.
728 nwere obere viscosity na ezi mgbanwe mgbe agwọrọ ya, nke kwesịrị ekwesị maka mkpuchi ọsọ ọsọ. A na-ahapụ ya ka ọ mụbaa itinye ọrụ na-arụ ọrụ n'okpuru ọnọdụ akọwapụtara. Akụ na ụba na ịrụ ọrụ bụkwa njirimara.
823A / 828B bụ ihe na-efu ọnụ, na-akwụ ụgwọ PU na-enweghị ihe mgbaze bụ nke a na-ejikarị eme ihe maka lamination n'etiti ihe nkiri plastik na ihe nkiri metalized, nke etinyere n'ọtụtụ nri, ọgwụ, kemịkalụ kwa ụbọchị, nkwakọ ụlọ ọrụ.
823A / 828B nwere obere viscosity na ezigbo wettability, nke nwere ike izute ihe chọrọ ọsọ ọsọ ọsọ (450m / min).
9662 RTV elu-arụmọrụ nrapado bụ otu akụrụngwa na ụlọ okpomọkụ na-agwọ, ụdị dealcoholization. Alcohols wepụtara mgbe ọ gwọchara, ọ na-enweghị isi mgbakasị emepụtara, mgbagha dị elu na nrụgide nrụgide nrụgide. Akwa okpomọkụ na iru mmiri na-eguzogide ọgwụ. Arụ ọrụ dị elu na mkpuchi, Nnyocha mgbochi mmiri, nkwụsi ike ịma jijiji.
A na-eji ya maka akara na njikọta nke mkpuchi ọkụ ụgbọ ala, ọkụ mara mma na ọkụ ọkụ.
5299 Silicone Akụrụngwa Abụọ
5299 Silicone Akụrụngwa abụọ ejiri maka ọkpụkpọ nke ike na ngwa eletriki na akụkụ. Karịsịa maka ọkpụite n'ime na n'èzí ikanam ngosipụta. Ime ụlọ okpomọkụ ma ọ bụ kpo oku kpo oku. High arụmọrụ na mkpuchi, keguru mmiri proofing, vibration eguzogide, chemical-eguzogide.
9331 RTV akwa-arụmọrụ nrapado bụ otu akụrụngwa. Ọ na-eji maka nile di iche iche nke elu-ọgwụgwụ ọkụ ụlọ ọrụ bonding, akara, electronic components bonding, mkwado, ezinụlọ ngwa components mkpuchi, akara na mgbochi leakage, mmiri-àmà, shockproof, friji na oyi kpọnwụrụ ngwá mkwado akara.
AB gluu, maka iji ya mee ihe ọ bụla, ụgbọ ala na ụgbọala na-arụzi ụgbọ ala, ọtụtụ nhọrọ akụ na ụba, na-ebupụ nnukwu olu
Onye Mmekọ Ọhụrụ AB Glue gwọọla na ụlọ ọkụ ọkụ ngwa ngwa ma nwee ike jikọtara ya ọnụ ntakịrị mmanụ, na-arụzi akụkụ tank mmanụ, tankị, ọkpọkọ, flanges, transformers, sinks okpomọkụ na akụrụngwa ndị ọzọ. Enwekwara ike iji ya maka igwe, seramiiki, plastik, osisi na nnyapade onwe gị nke nnyapade.
Ahụghị ihe ị na-achọ?
Industrylọ Ọrụ Vegbọ Ala Azụmaahịa